Iza no tsara kokoa ho an'ny mpanamboatra tanjona Baoji titanium？
Titanium madio indostrialy: Ny votoatin'ny fahalotoan'ny titane madio amin'ny indostria dia mihoatra ny an'ny titanium madio simika, ka ny heriny sy ny hamafiny dia somary avo kokoa. Ny toetrany mekanika sy simika dia mitovy amin'ny vy vy. Raha ampitahaina amin'ny firaka titanium, titanium madio dia manana tanjaka tsara kokoa ary misy fanoherana tsara amin'ny oksidana. Tsara kokoa noho ny vy tsy misy austenitika izy io, fa tsy mahatohitra hafanana ratsy. TA1, TA2, Fisondrotana TA3 amin'ny atiny maloto, ny tanjaka sy ny hamafin'ny mekanika dia mitombo milamina, fa ny hamafin'ny plastika mihena milamina.
Ny firaka titanium β-karazana dia azo hamafisina amin'ny alàlan'ny fitsaboana hafanana, miaraka amin'ny tanjaky ny firaka avo, fanaraha-maso tsara sy fahombiazan'ny tsindry, saingy miovaova ny zava-bitany ary sarotra ny fizotrany.
. takelaka titanium: 0.5-4.0MG
Takelaka misy solomaso (titanium madio): 0.8-8.0MG
Takelaka mahazatra (titanium madio): 1 x 2m hateviny: 0.5-20MG
Takelaka ho an'ny indostrialy elektrika sy orinasa hafa (titanium madio): 0.1-50MG
fampiasana: ELEKITRONIKA, simika, famataranandro, solomaso, Jewelry, entana fanatanjahan-tena, fitaovana mekanika, fitaovana elektrika, fitaovana fiarovana ny tontolo iainana, indostria fanodinana golf sy fametrahana mazava tsara.
Izay tsara kokoa ho an'ny mpanamboatra kinova Baoji titanium??
Shaanxi Zhongbeitai Target Sputtering Target Company dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana tanjona kendrena isan-karazany (kendrena amin'ny fahadiovana avo / kendrena firaka / kendrena tokana) (tanjona kendrena mihodina / planar), ary manome mpanjifa miaraka amin'ny tohana varahina ary manampy amin'ny serivisy Set. Ny vokatra dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny masoandro manify, indostrian'ny fampisehoana tontonana fisaka, indostria fitaratra ambany, ravaka sy indostrialy fandrakofana azo ampiasaina ary sehatra hafa.
Précédent: 2021 Nanomboka ny China Titanium Valley International Titanium Industrial Expo
Manaraka: Ny firafitry ny lohan'ny fiaramanidina